Rehefa lalàna dia lalàna | NewsMada
Par Taratra sur 05/12/2019
Ady fiady ny amin’ny voka-pifidianana? Rehefa resy ny tena, mitady izay lalana sy ny fomba rehetra hanoherana izany: tsy ara-dalàna itsy, tsy mety iroa. Rehefa voafidy indray ny tena na ny kandidà narotsaka, mangina sy tsy mihetsika. Izany no afitsoky ny kandidà sasany sy ny mpomba azy na ny antokony amin’izao.
Tsy inona ny lalaovina amin’izany fa ny lalàna. Tsy mahagaga fa toy ny hatramin’izay ihany: mahay lalàna avokoa ny olon-drehetra? Na heverina ho tsy misy tsy mahalala lalàna… Ny mahavalalanina: ny mpahay lalàna sasany no tena mpilalao lalàna… ho araka ny tombontsoany manokana na izay arovany.
Nefa rehefa lalàna dia lalàna. Izay fanazavana sy fahazoana ny lalàna izay no tsy ampy eto amintsika? Indrindra ny fanajana sy ny fampiharana… Hany ka tsatsoina ho tsy ara-dalàna avokoa izay mitranga sy atao rehetra rehefa tsy arakaraka ny tombontsoan’ny tena. Rahoviana vao tena hitoviana ny fandikana lalàna?